Etu anyị si rute elele kwa ọnwa 100,000 | Martech Zone
Fraịdee, Nọvemba 25, 2011 Tọzdee, Eprel 27, 2017 Douglas Karr
Fọdụ ndị folks chere na mwakpo nke blọọgụ na saịtị mgbasa ozi na-eme ka o sie ike ịnụ olu gị. Ọ bụ eziokwu na mkpọtụ ahụ na-akawanye ike, ohere iji nụ olu gị ma ọ bụ olu ụlọ ọrụ gị nụrụ na soshal midia ka agaghị ekwe omume, ọ dị mma ma ọ bụrụ na inwere ọdịnaya ndị mmadụ na-achọ.
Anyị ka karịrị Ihe ngosi 100,000 na November na Martech, ndekọ oge niile ma mee ka anyị banye na blọọgụ azụmaahịa na-enweta ihe karịrị 1 nde ndị ọbịa kwa afọ. (Mara: eserese dị n'okpuru adịghị nsochi oge niile from naanị site na mgbe anyị malitere iji WordPress Stats)
Yabụ kedu ka anyị siri mee ya? Anọ m na-agwa ndị mmadụ ọrụ m niile (ọbụlagodi tupu ịntanetị) na isi ihe maka nnukwu ahịa bụ iji ọtụtụ ndị na-ajụ ase iji kwalite ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. Nweghị ike ịkwanye ego gị niile na otu ọkara… ọ bụghị naanị na ị na-amachi ndị na-ege ntị, mana ị na-amachikwa ụda olu gị. Ruo afọ 5, Martech bụ blọọgụ ederede. Enweghị m ego ma ọ bụ oge iji ndị na-ajụ ndị ọzọ ase, yabụ, m na-arụ ọrụ iji bulie onye na-ajụ ase.
Afọ a; n'agbanyeghị, ọ dị nnọọ iche. Ndị a bụ atụmatụ dị iche iche anyị rụworo na:
N'ime afọ gara aga anyị edere a kwa izu redio na-egosi (kwụsịrị taa n'ihi ezumike US). Anyị enweela izu mgbe izu na-agwa ndị kasị ukwuu ahịa uche na ụlọ ọrụ ahụ ma ihe nkiri ahụ etoola - ya na ọtụtụ puku ndị na-ege ntị kwa ọnwa.
Anyị webatara otu email ahịa mmemme nke gara n'ihu na-eme ka ndị ọbịa laghachi na blọọgụ ahụ. A na-arụgharị ọrụ ugbu a ka anyị na-akwaga na onye nkwado kachasị ọhụrụ anyị, Delivra, mana ọ bụ nnukwu ụzọ aghụghọ. Ọ bụrụ na blog gị enweghị mmemme email, bido ya taa! Anyị na-arụ ọrụ na ụfọdụ ngwaọrụ maka ndị ọrụ WordPress na mpaghara ahụ… na-enyocha anyị!
Onye nrụpụta anyị, Stephen, rụrụ ọrụ na ọtụtụ plugins - gụnyere ndị Ngwa wijetị Youtube, na-enweta nlebara anya dị ukwuu site na obodo WordPress.
Tinyere ịdebanye ihe ngosi redio anyị, Jenn anọwo n'esepụghị aka na itinye aka na netwọkụ anyị na Twitter, Facebook na LinkedIn na okporo ụzọ sitere na mmekọrịta mmadụ na ibe ya agbawaala, mgbe mgbe karịrị okporo ụzọ ọchụchọ anyị kwa ọnwa! Anyị na-eji ugbu a echekwa iji nyere aka ịhazi ma debe mkparịta ụka ndị ahụ n'ịntanetị.
Social ibe edokọbara na chọpụtara saịtị dị ka StumbleUpon eziterela anyị ọtụtụ okporo ụzọ, yabụ ịtinye bọtịnụ nkekọrịta mmekọrịta na post ọ bụla iji mee ka ọ dịrị ndị na-eso ụzọ ike ịkekọrịta ọdịnaya anyị na netwọkụ ha abụla ezigbo ụzọ iji mee ka anyị nwee ọhụụ ọhụrụ.
Anyị na-arụsi ọrụ ike na-akwalite saịtị, kwa, na obere mmefu ego nke mgbasa ozi na Facebook na LinkedIn na ndị na-ege ntị. Amaghị m na enwere ọtụtụ nlọghachi na ntinye ego ebe ahụ, mana ọ bụ ezigbo ntinye aka iji mee ka Martech buru n'uche ndị anyị lebara anya na CMOs na ndị isi ahịa.
Anyị etinyegola ntuli aka iji tinye aka na ndị na - agụ akwụkwọ anyị. Zoomerang abụrụla onye nkwado dị egwu ma nyere anyị aka ijide mmasị na echiche nke ndị ọbịa, na-enye anyị echiche ọdịnaya ndị ọzọ kwa izu. Otu akaụntụ Zoomerang bụ n'efu, yabụ ana m agba onye ọ bụla ume iji ya! Otu okwu ịdọ aka ná ntị bụ na enwere ike ị gaghị enweta nzaghachi dị ukwuu site na nyocha gị. Ọ bụ ezie na ndị mmadụ na-enwe mmasị ịgụ blọọgụ, ha anaghị esonye mgbe niile.
Anyị emepeela Infographics Ahịa maka ma Delivera (Ezumike kacha mma Email) na Zoomerang (Ndị ahịa na SMB Nsonaazụ Social Media Survey) ma tọhapụ ha Martech Zone dị ka akụkụ nke nkwado nkwado anyị na ụlọ ọrụ ndị ahụ. Ihe omuma ihe omuma bu ihe di nma nke iru ndi mmadu ma oburu na imara ka esi mara leverage ha!
Anyị bugara blọọgụ na ọkwa nka Ahịa ụlọ ọrụ Bochum, WPEngine jikọtara ya na a Nzipu Nwepụta ọdịnaya kwadoro Site StackPath CDN, CDN ngwa ngwa karịa Amazon.
Ikpeazụ na mmetụta kasịnụ: mbụ, ọdịnaya bara uru! Ọ bụ ezie na ndị ọzọ na ịre ahịa na teknụzụ nke blọọgụ chọrọ ịlụ ọgụ maka akụkọ kachasị ọhụrụ - ma ọ bụ nke ka njọ - regurgitate ya, anyị na-arụ ọrụ oge niile iji hụ na ị na-anata ihe bara uru, nke bara uru, na-egosipụta arụmọrụ na ụlọ ọrụ.
Kedu ihe ọzọ? Anyị gị n'ụlọnga na di na nwunye na ulo akwukwo di iche-iche na ndi kompeni di iche-iche n’agbazi akwukwo. Anyị ga-arụ ọrụ ndị ahụ n'ime Webinars na ọzụzụ ọmụmụ maka ndị na - agụ akwụkwọ anyị. Nke a ga - enyere anyị aka ịgabiga mkparịta ụka ahụ wee daa ala ma nweta nsonaazụ dị mma. Lezie anya maka ụfọdụ vidiyo ndị ọzọ, webinars na ebook na-abịa n'ụzọ gị!
Nyaahụ bụ Ekele dịrị ebe a na United States ma enwere m ekele maka nkwado niile ị nyere anyị! Daalụ!
Tags: 100000echiche blognlele ihu akwụkwọechiche
Nov 27, 2011 na 6:30 AM
Chaị! Are dị ịtụnanya! Ọ dị m ka ya bụrụ na m ga-enweta ọkara nke ndị ọbịa gị. Aga m anwale ụfọdụ ndụmọdụ na ndụmọdụ gị.